Systemd uye SELinux: Yakachengeteka? | Linux Vakapindwa muropa
Mumakore achangopfuura pave paine shanduko dzakakosha mune dzakawanda GNU / Linux distros senge kusanganisa kweiyo nyowani systemd boot system, yatatotaura nezvayo nguva dzinoverengeka uye yakaunza muswe uye nekuvimbisa kukakavara. Naizvozvo, yakakamura vagadziri vazhinji uyezve vashandisi vazhinji vari kutsigira uye vamwe vachipesana neiyi nyowani sisitimu, sezvazvinowanzoitika nezvose. Haimbonaya kune wese munhu achifarira ...
Imwe nyaya yakaoma iyo zvakare ine vashori vayo uye yakatendeka inyaya yemutambo wekuchengetedza SELinux, kugadzira mitemo yekudzivirira kugoverwa uye kukwikwidza neAppArmor zvakananga. Nekudaro, SELinux yakave neNSA yakabatanidzwa mukusimudzira kwayo uye izvi zvinomutsa kukahadzika pakati pevazhinji vashandisi nenyanzvi. Sei mbavha inozvipira kupaza dzimba ichikutengesera yakanaka kiyi? Izvi ndizvo zvinofungwa nevazhinji veSELinux, nei iyo NSA inoda kupinda mumakomputa kune yavo espionage basa ichikubatsira kuchengetedza komputa yako kubva pakurwiswa?
Vakawanda vanofunga izvozvo SELinux inogona kunge iine kumashure iyo inobatsira iyo NSA kuve nekukasira uye isina musono kuwana kune chero chishandiso kana sevha inoishandisa, nepo kune rimwe divi vanovhara nzira yekumwe kurwiswa nekuzadzisa iro chairo basa iro rakagadzirirwa. Vamwe havabvumirane zvakanyanya nekuchengetedzeka kwesystemd kuitisa pane maseva uye apa ndipo panomuka kusahadzika kukuru.
Pakati pekuchinja kwakanyanya kunetsa kuLinux mumakore gumi apfuura kwave kuiswa uye kubatanidzwa kwakawanda kweiyo systemd boot system muLinux. Chaizvoizvo izvi zvakurukurwa mu CoreOS Fest iyo yakaitwa svondo rapfuura muBerlin. Iko Lennart Poettering, mumwe wevanogadzira main systemd akaita hurukuro yekudzivirira inodzivirira systemd senzira yakachengeteka yemaseva, asi yaipesana neSELinux. Kunyangwe kuve mushandi weRed Hat, kambani iri kuseri kweSELinux pamwe neNSA, akati “haana kuzvinzwisisa. […] Panogona kunge paine vanhu makumi mashanu munyika vanonzwisisa maSELinux marongerwo ”.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Systemd uye SELinux: Yakachengeteka?
Ini handikwanise kunzwisisa kuti njodzi yekuchengetedza systemd chii, uye pane selinux inofanirwa kunge iri chirongwa pasi peirisense yemahara, uye nekuti inogadzirwa nsa, ine maziso enharaunda yekuvandudza pazviri.
Icho chinhu chimwe kuti zvive zvakaoma kunzwisisa kana kugadzirisa mitemo yayo uye imwe yacho kuti ive isina kuchengetedzeka